openSUSE: Fampisehoana - Tambajotra PYMES | Avy amin'ny Linux
Salama namana !.
The Serie "SME Networks»Natao ho an'ireo rehetra izay, amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa, tsy maintsy miatrika isan'andro an'ity karazana tambajotra mahazatra eto amin'ny orinasa na ivon-toeram-piasantsika ity. Ireo fizarana nofidianay ho fampandrosoana azy ireo dia fitoniana sy filaminana azo antoka. Efa nohazavainay tamin'ny antsipiriany tao amin'ny lahatsoratra izany Fitsinjarana mandritra ny fotoana fizarana Linux.
Betsaka ny mpamaky no mahalala ny safidiko ho an'i Debian izay nasehoko tamin'ny lahatsoratro voalohany nosoratana - efa ho 5 taona lasa izay- ho an'ny bilaogy humaOS.uci.cu natokana ho an'ny Free Software, izay Aza avela hisakana antsika tsy hahita ny ala ny hazo!, navoaka koa tao amin'ny Avy amin'ny Linux ho an'ny volana martsa 2012.
Na izany aza, ary nanomboka teo, isaky ny nisy nanontany ahy momba ny tolo-kevitro momba ny fizarana ny tontolon'ny asa aman-draharaha, dia novaliako foana hoe: openSUSE.
Nanazava ihany koa izy fa ny Desktop ho an'ny trano na ho an'ny fampiasana manokana ho Administrator an'ny Systems dia tsy mitovy amin'ny Workstations natokana ho ampiasain'ny mpiasan'ny orinasa iray izay nanaiky ny tontolon'ny Free Software.
Novaliako fa, na eo aza ny fanjifana be loatra ny loharanon-karena amin'ity fizarana ity, ohatra, i Debian, dia nihazona ny tolo-kevitro aho. Io openSUSE dia fizarana notontosain'ny mpamorona azy hampiasaina amin'ny orinasa, nefa tsy nesorina ny zava-misy fa mety tsara ampiasaina amin'ny Servers, Desktops ary Workstations izy io, satria fizarana tanjona ankapobeny.
Raha mifanaraka amin'ireo voalaza etsy ambony ireo isika, dia tokony hiresaka an'io fizarana lehibe io. Tsy manana ny DVD fametrahana ho an'ny kinovanao izahay 42.2 openSUSE Leap na avy amin'ny toerana anaovany azy, tsy lazaina intsony fa tsy manana fifandraisana Internet haingana loatra amin'ny fametrahana mivantana avy amin'ny tranonkala izahay.
Soa ihany fa manana ny DVD misy ny kinova fanindroany isika OpenSUSE 13.2 navoaka tamin'ny 24 Novambra 2014, ary koa trano fitahirizana ampy ampy izay milanja 88.5 Gbytes.
1 Ny fijerinay dia ...
2 openSUSE 13.2 dia… araka ny mpamorona azy manokana
4 Rohy mahaliana
4.1 OpenSUSE Wiki footer
5 Fanaterana ho avy
Ny fijerinay dia ...
Ny SME dia mitaky Servers sy Workstations miaraka amin'ny rafitra miasa azo antoka, azo antoka ary mora ampiasaina.
Raha tsy manana ekipa manam-pahaizana Linux voaomana tsara ianao, dia mila ny fanamorana ny fametrahana, ny fametrahana ary ny fampidirana ny mpizara tsirairay sy ny toeram-piasana, miaraka amin'ireo serivisy tambajotra samihafa, ao anatin'izany ny fanamarinana- izay ampiasaina ao ny SME.
Aleo tadidio foana fa ao amin'ny Series PYMES dia miresaka momba ny tontolon'ny orinasa na tontolo iainana isika -tsy ny ao an-trano- izay ny tanjona lehibe indrindra dia ny ahazoana tombony amin'ny vidiny ambany indrindra, ao anatin'izany ny fiofanana, ny fanohanana ara-teknika, ny rindrambaiko sns.
Raha tsy manana loharanom-bola ilaina handoavana ny serivisy fanohanana ara-teknika ny SME, ary manana mpiasa teknika fotsiny - manana solosaina fototra, ny OpenSUSE dia safidy tena tsara dinihina.
Raha hifindra monina avy ao Windows ny SME, ohatra, openSUSE dia safidy tsara koa hodinihina.
Fitsinjarana miaraka amina antontan-taratasy ara-teknika tena tsara izay, ankoatry ny fiteny hafa, dia misy ny Espaniôla.
openSUSE 13.2 dia… araka ny mpamorona azy manokana
Raha mitsidika ny OpenSUSE Wiki amin'ny Espaniôla, eo amin'ny pejy openSUSE Portal: 13.2 ho hitantsika voambolana -mba misy fampahalalana hafa- ireto manaraka ireto:
Ezaka be no nandramana natao tamin'ity lahatsoratra ity, miaraka amin'ny fanatsarana ny fitaovana fanandramana mandeha ho azy openQA, fitaovana iray hiantohana fa ny valiny farany dia tsy misy tsy ampoizina tsy mahafinaritra. Ny rafitry ny rakitra Btrfs dia rafitra fisie default ho an'ny volan'ny faka, raha ny XFS kosa dia ny rafitra fisie default ho an'ny volume / home. Ny kernel Linux 3.16 dia mitondra fanatsarana ihany koa amin'ny fitoniana sy ny fanekena ireo fitaovana samihafa. Ho fanampin'izany, ny kaody loharanom-pahalalana YaST dia efa matotra taorian'ny nandefasana azy tany Ruby, fiteny iray manamora ny famolavolana endrika sy fitaovana vaovao.
Ity famotsorana ity dia miaraka amin'ny AppArmor 2.9 izay alefa amin'ny alàlan'ny default, izay midika hoe azo antoka kokoa, ary manana mombamomba azy ao amin'ny AppArmor. Betsaka koa ireo fonosana nohavaozina hafa ao anatin'izany ny fitaovana tambajotra maro hafa toa ny Samba, AutoYaST sy ny maro hafa.
openSUSE 13.2 dia miaraka amin'ny GCC 4.8 sy ny safidy hametraka ny GCC 4.9 vaovao, ary ny Qt 5.3 izay mitondra fanatsarana maro ho an'ny interface QT. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hametraka ny KDE5 vaovao (izay mbola eo an-dàlam-pamolavolana).
Amin'ity famoahana ity, ny YaST "nadika" ho amin'ny fiteny Ruby dia efa matotra ka ny codebase-ny izao dia azo antoka kokoa ary feno endrika vaovao lehibe kokoa noho ny nandrasanao avy amin'ny Yast. ActiveDoc manohy ny toerana hahitana antontan-taratasy momba ny fitaovana isan-karazany izay ho hitanao na ho ela na ho haingana eo amin'ny tontolon'ny Linux. Ny Version 13.2 dia manolotra ihany koa ny KDE 4.14 izay ho tontolon'ny birao raha toa kosa ny tetikasa KDE dia manohy mamolavola izay ho Plasma 5. Mandritra ny GNOME dia afaka mankafy ny kinova 3.14 ianao. LXDE Nohavaozina tamin'ity famoahana ity tamin'ny alàlan'ny fonosana nohavaozina, fanatsarana ny mason-tsary ary fanamboarana bibikely iray taonina.
Linux 3.16 dia miaraka amin'ny fanatsarana ho an'ny nouveau, mpamily loharano misokatra ho an'ny karatra NVIDIA, ary koa endri-javatra maro hafa ho an'ny sary avy amin'ny Intel sy AMD. Ity kernel vaovao ity koa dia manatsara ny fahombiazan'ny Btrfs sy XFS.
Ny KDE dia tonga miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fampifangaroana ireo fitaovanao finday amin'ny alàlan'ny fonosana kdeconnect. Ny rafi-drakitra Btrfs vaovao izay napetraka ho default amin'ny fisarahana faka, dia midika fa hisy fampiasa vaovao be dia be, mihoatra ny noeritreretinao natao. YaST koa dia miaraka amin'ny interface Qt vaovao izay novaina ihany koa amin'ny Qt5.
Ity famoahana vaovao ity dia manana teknolojia fanandramana vaovao be dia be izay azonao andramana, toy ny Wayland 1.4, KDE Frameworks 5, ilay rindrambaiko farany azo avy amin'ny Build Service ary loko vaovao ho an'ny lohahevitra fizarana.
Miatrika fizarana tena tsara izahay ka afaka misafidy ho an'ny orinasanay.
Ahoana ny fifindra-monina avy amin'ny Windows
Fitsinjarana maharitra farany
openSUSE Rolling Famoahana Tumbleweed
OpenSUSE Wiki footer
2011 Novell, Inc. sy ny hafa. Ny atiny rehetra dia natao araky ny fehezan-kevitry ny GNU Free Documentation Lisansa 1.2 ("GFDL") raha tsy voalaza mazava. | Fepetran'ny tranonkala
Fanaterana ho avy
Manasa anao izahay hanohy ny fizarana manaraka: openSUSE Desktop, Qemu-KVM miaraka amin'ny openSUSE, ary DNS - DHCP miaraka amin'ny openSUSE
Araka ny hitanao, ry namaky namana, ny filaharan'ny lahatsoratra miovaova arakaraka ny profametrahana sy tsy ampoizina ananantsika ho anao. 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » openSUSE: Fampisehoana - SME Networks
Tena tsara! Mampiasa OpenSuse amin'ny fiainako isan'andro aho ary afa-po mihoatra ny.
Aza misalasala, Leo, io dia iray amin'ireo fizarana Big Three. Andraso ny fizarana manaraka amin'ny openSUSE!
Tamin'ny taona 2011 dia nampiasa ny OpenSuse voalohany aho (teo amin'ny sehatry ny birao), tamin'izany fotoana izany ny distro izay nanomboka haingana indrindra, avy eo tsy nikitika azy intsony aho raha tsy nametraka openuse tumbleweed tamin'ny taon-dasa (izay tena mandeha tsara koa) ... Ankehitriny Fotoana hanaovana izany amin'ny haavon'ny mpizara, izay azoko antoka fa toerana azo ampiasaina indrindra io distro io
openSUSE dia fizarana tanjona ankapobeny. Miaraka aminy isika dia afaka manao birao avo ihany koa. Heveriko fa ny fitaovam-piadianao tsara indrindra dia ny YaST, indrindra ho an'ireo izay tsy zatra mampihatra sy mandrindra serivisy amin'ny alàlan'ny console. Ny mpandrindra mpizara Windows dia tsy maintsy mampifanaraka tsy misy olana raha hampiasa openSUSE, ary hampihena ny vidiny ao amin'ny SME anao. Manamora ny fiainana andavanandro ho an'ny Linux Sysadmin koa izany.
Fifandrifian-javatra, manana Leap 42.2 amin'ny solosaina finday aho, nahazo Plasma 5 versionitis aho ary nametraka an'i Stretch fa tena tsy marin-toerana izany, nanoro hevitra an'i Leap izy ireo ary nanandrana izany aho nefa tsy nanantena firy fa nahagaga ahy izany, birao Plasma b Boutique. Izay tsy azoko ... ireo trano fitahirizana Debian goavambe.
Salama Dhunter !!!. Very tany amin'ireo faritra ireo ianao. Tsy mbola nanandrana an'i Leap aho noho ny olana momba ny repo. Raha nolazaina tamiko, ireo izay mametraka mivantana amin'ny Internet, izay tsy olana intsony. Manohy miaraka amin'ny Debian Jessie sy ny MATE ahy aho. 😉 Hanoratra momba ny Leap aho, aorian'ny nitondran'i Eduardo Noel ahy ireo repos faly.
Ahoana ny fanovana ny loko an'ny baikon'ny ls amin'ny Linux